သကျသခေံလွန်ကျူးနည်းဗျူဟာ | Apg29
960 online! | Sidvisningar idag: 171 511 | Igår: 156 273 |
သကျသခေံလွန်ကျူးနည်းဗျူဟာဤ blog post တွင်ငါအမှုအပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရရှိရန်ယေဟောဝါသက်သေသစ္စာပျက်သောနည်းပရိယာယ်ထုတ်ဖေါ်သွားတာပါ။တစ်ဦးအတွက် အတိုချုပ် blog post ငါနောက်တဖန်တစ်ဦးအလည်အပတ်ယေဟောဝါသက်သေလက်ခံရရှိသူကပြောပါတယ်။ သူတို့ကကောင်းတဲ့ခဲ့ကြပေမယ့်နွေးထွေး brainwashed နှင့်လှည့်ဖြား! ဒါဟာအလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာလူတွေအကြောင်းကိုသိပ်ဆိုးပါတယ်။ သူတို့ကယ့်ကိုအစဉ်အမြဲပျောက်ဆုံးသွားဖို့မ, ယရှေုခရစျသလကျခံဖို့လိုပါတယ်။ဒီအချို့သောပို blog post: ပါဝင်တဲ့၌ငါအမှုအပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရရှိရန်သူတို့၏သစ္စာပျက်သောနည်းပရိယာယ်ထုတ်ဖေါ်သွားတာပါ။သစ္စာပျက်သောနည်းပရိယာယ် ယေဟောဝါသက်သေရှိသည်သောတစ်ဦးလွန်ကျူးသောနည်းပရိယာယ်ကိုသူတို့လိုအပ်သညျယရှေုအပေါ်သဘောတူနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ဒါပေမဲ့သူတို့ထို့နောက်အမှုပေါ်တွင်သင်ရရန်ကြိုးစားရန်သူတို့အခြေအနေတွင်ထဲကခုတ်ဖြတ်သော်လည်းကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်လာမယ့်အသက်ရှု၌ဤခံယူသှနျသငျ ။ အဲဒီမှာခေါ်သူတစ်ဦးယောက်ျားနဲ့မိန်းမကို, အသူသည်ဤအချိန်မှာအကုန်လုံးအပြောအဆိုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူသညျယရှေု၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုကယ်တင်နှင့်နိုင်ငံတော်ကိုဟောပြောဖို့အားလုံးမှမလာဘဲသူကပြောပါတယ်။ ဆွဲငင်အား၏ဗဟိုရွေ့လျားအကြောင်းပြောဆို! ဒီတွင်သူကရှားသညျယရှေုကနေ "နိုငျငံတျော" ဘာမှမအဘို့အဘယ်သို့သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးကသူ့မျက်စိလှုံ့ဆျောသက်သေပြခဲ့သည်။ သင်ဤအပြောအဆိုအပေါ်သွားလျှင်ယေရှုခရစ်၌ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်လွတ်ပျောက်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့နည်းဗျူဟာများနှင့်အပြောအဆိုများကိုတိုက်ရိုက် devilish နှင့်တျသှငျးခံနတ်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ယေဟောဝါသက်သေခရစ်ယာန်တွေဟာမဟုတ် အဘယ်သူမျှမနားလညျမှုလှဲမှားသင့်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျော်ဖြစ်လိမ့်မယ်: ယေဟောဝါသက်သေမရှိခရစ်ယာန်လှုပ်ရှားမှုများမှာ! ယေဟောဝါသက်သေနေသောသူတို့ကိုကြသည် မဟုတ် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, သူတို့ကခရစ်ယာန်တွေမဟုတ်။ ထို့အပွငျ, ကျနော်တို့ယေဟောဝါသက်သေများ, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ခေါ်ကြသည်မဟုတ် သညျယရှေုခရစျ၏သကျသခေံ !တ 1း8 သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်သင်တို့အပေါ်သို့ကြွလာသောအခါ, သင်တို့သည်တန်ခိုးကို ခံရ. နှင့်ဖြစ်ရလိမ့်မည် ငါ၏အ [ယေရှု] မျက်မြင်သက်သေများ ယေရုရှလင်မြို့၌အပေါင်းတို့, ယုဒပြည်နှင့်ရှမာရိအတွက်, နှင့်မြေကြီးဆီသို့။ ခိုင်ခံ့သောစိတ်ကမျြးစာအမှနျတရားကိုငြင်းပယ်သူတို့ကအစသမ္မာကျမ်းစာသည်သမ္မာတရားကိုငြင်းပယ်ဖို့တစ်ခုတည်းဖြစ်စဉ်များနှင့်ခိုင်ခံ့သောစိတ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ငါနည်းလမ်းများသူမကအဘယျအရာမှအံ့ဩကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောမိန်းမအားရှင်းပြခဲ့သည်အခါ။ "အပြစ်တရားမှ, သေခြင်း, ငရဲ ... " ငါကစတင်ထိုအခါမူကားငရဲကိုငြင်းပယ်လျက်နေဖြင့်တိုက်ရိုက်လူသည်ငါ၌ရပ်တန့်တော်မူသမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ထိုသို့သောအမှုကိုအဖတ်ဘယ်တော့မှသိရသည်ဟုဆိုသည်။ ငါဖြစ်ကောင်းကမရှိထိုကဲ့သို့သောအရာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်မိမိအသမ်မာကမျြးဘာသာပြန်ချက်အတွက်ဘယ်လောက်သိကြပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်သူကမှာအားလုံးကမျြးစာကိုမဖတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကင်းမျှော်စင်ပေးသည်အဖြစ်ပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပေမယ်ဤမျှလောက်များစွာသောအရပ်တို့ကိုအမှန်တကယ်ကမျြးစာကိုဘာသာပြန်ချက်အတွက်ငရဲမဆိုအချိန်မရွေးရှိတယ် ။ ယေရှုအားအနီးကပ်နေပါ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ပြန်ချက်မည်သူမဆိုရှုပ်ထွေးရနိုင်။ ထိုကြောင့်သင်သည်၎င်းတို့၏နည်းဗျူဟာများနှင့်အပြောအဆိုအပေါ်သွားဘယ်တော့မှသင့်ပါတယ်သင်မူကားအစဉ်အမြဲယေရှုနှင့်အတူကပ်ရန်ရှိသည်။ အားလုံးvillolärorsများအတွက်ရည်မှန်းချက်ကိုသင်ထာဝရငရဲမှပျောက်ဆုံးသွားပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ကွာသညျယရှေုကနေအာရုံပြောင်းရွေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ယေရှုအကြောင်းငါနှင့်အတူသဘောတူညီခဲ့သည့်အခါကစစ်မှန်တဲ့ခဲ့လျှင်, သူတို့သည်ငါဟောပြောငါ့ကိုသညျယရှေုထွက်ခွာရရန်ကြိုးစားတာပါ။ ထိုသူတို့က, ငါသည်ယေရှုနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုသောအခါ, ယရှေုသညျအကြှနျုပျကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီဖူးခဲ့သည်။ ဤသူသည်ငါသည်လည်းမှတ်ချက် (မှတုန့်ပြန်ရေးသား www.apg29.nu/a/8p ) ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့သညျယရှေုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသောကြောင့်, နားမလည်ခဲ့ဘူးနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သည်။ 1 ယော 4:6ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ဆိုင်။ အကြင်သူသည်ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုနားထောင်သိတယ်။ ဘုရားသခင့မဟုတ်သူမည်သူမဆိုကျွန်တော်တို့ကိုနားမထောင်ပါဘူး။ ဒါကကျနော်တို့အမှန်တရားနှင့်မှိုင်းတိုက်စိတ်ဝိညာဉ်၏ဝိညာဉျတျောကိုအသိအမှတ်မပြုဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis ကလုံးဝကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်မဟုတ်။ သူသညျယရှေုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးပါခင်ဗျားဘာလို့လဲဆိုတော့သူသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ဖူးသူခရစ်ယာန်တစ်ဦးမဟုတ်ပါ။2Läs allt!နွေရာသီစာဖတ်ခြင်း: အဆိုပါအရှည်ဆုံးညဥ့်
ကအားလုံးကိုအနိုင်ရတစ်ဦးကဟုတ်မှန်သည့်မသိမမြင်နိုင်သောဆုံးရှုံးမှု၏ဇာတ်လမ်းနှင့်။0Läs allt!ဆုတောင်းပဌနာအဖြေများကို - Johan Gustafsson အစ္စလာမ်မစ)ရုပ်ပုံ: နေ့။ 2011 ခုနှစ်တွင်မာလီအတွက်အစ္စလာမ့်အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုကိုအယ်လ်ကေးဒါးတို့ကပြန်ပေးဆွဲခဲ့သူVärnamoမှ Johan Gustafsson, 42, ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးရုံဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးပြန်ပေးဆွဲ။ ပဲန်တီကော့စအသင်းတော်၌နေသောမိဘများပဌနာဖြေကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်!14Läs allt!မဟာရိတ်သိမ်းnils အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် သခင်ဘုရားပြုတော်မူမည်အရာကိုအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ဗျာဒိတ်တော်: ကြီးစွာသောစပါးရိတ်ရာကာလ!17Läs allt!RFID ချစ်ပ်များ၏ Sanna ရဲ့အိပ်မက်အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် nils "ထိုအခါအကြှနျုပျသ chip ကိုကြိုက်နှစ်သက်မှ, stepwise (ဖြည်းဖြည်း), ဒါကြောင့်သူပြီးသားပရိုဂရမ်နှင့် brainwashed ထားပြီးဆိုလိုကြောင်းသိသည်။ "99Läs allt!"သားရဲ၏ လာ. ကွညျ့"အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် nils
Nils: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet David B: Katolska kyrkan förnekar att helvetet är en plats Lasse: Bönesvar - Johan Gustafsson frisläppt från muslimska terrorrörelsen al-Qaida Lasse: Bönesvar - Johan Gustafsson frisläppt från muslimska terrorrörelsen al-Qaida Lasse: Bönesvar - Johan Gustafsson frisläppt från muslimska terrorrörelsen al-Qaida Andreas T.: Katolska kyrkan förnekar att helvetet är en plats Lasse: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Karin Ström: Bönesvar - Johan Gustafsson frisläppt från muslimska terrorrörelsen al-Qaida Karin Ström: Bönesvar - Johan Gustafsson frisläppt från muslimska terrorrörelsen al-Qaida Jean: Katolska kyrkan förnekar att helvetet är en plats Lasse: Påven är inte frälst Nils: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Johan: Påven är inte frälst Jessica: Bönesvar - Johan Gustafsson frisläppt från muslimska terrorrörelsen al-Qaida Lasse: Bönesvar - Johan Gustafsson frisläppt från muslimska terrorrörelsen al-Qaida Lasse: Hon såg Selena, Påven och Michael Jackson plågas i helvetet Lasse: Katolska kyrkan förnekar att helvetet är en plats Lasse: Bönesvar - Johan Gustafsson frisläppt från muslimska terrorrörelsen al-Qaida Lasse: Bönesvar - Johan Gustafsson frisläppt från muslimska terrorrörelsen al-Qaida Nils: Katolska kyrkan förnekar att helvetet är en platsကလေးသူငယ်များမဲပေးရ?အစိမ်းရောင်ပါတီ Lorentz Tovatt ပါလီမန်မှာအာသနန်းစံ Romsons လက်ထောက်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ 2013 ခုနှစ်တွင်သူသည်မဲပေးအသက်အရွယ်ဖျက်သိမ်းနှင့်ကလေးငယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးရသင့်ကြောင်းသင့်ကြောင်း Twitter တွင်ရေးသားခဲ့သည်!6Läs allt!ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံကိုအသငျးတျောကျော်တန်ခိအဘယ်ကြောင့်ငရဲကိုအသင်းတော်ကျော်တန်ခိုးမရှိရှိသနည်း သခင်ဘုရားသည် - ယေရှုခရစ်တော်၏မေရှိယကိုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ယရှေုသညျမေရှိယကို, သခင်ခဲ့လျှင်, အားလုံးငရဲအသငျးတျောကိုအုပ်စိုးခဲ့ကြပေသည်။3Läs allt!Aktuelltရှုပ်ထွေးသိပ္ပံပညာရှင်များဝဠာကြောင်း ..လေးမှားယွင်းသောဘာသာတရားများအတွက်ပုတီDen muslimska jungfru MariaEndast hos Jesus finns frälsningen - Femte delenသငျသညျလက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်းတရားဒေသနဥပုသ်လ 15 ရက်အကြာမှာဦးသေဆုံးပြီး 1053မွတ်စ်လင် 10 နှစ်ကြားရှိဆရာများခေါင်းဖြတIS-blogg uppmanar till terror i Sverige666 ကုရ်အာန်စတင်12 ရက်အတွင်းနိုင်ငံပေါင်း 21 နိုင်ငံအတွက်ဿ